Iindlela ezimbini zokufumana okuninzi kwi-NFC yakho ye-Android | I-Androidsis
I-NFC yitekhnoloji eyenza inkqubela phambili enkulu kwintengiso. Kwiifowuni ezininzi eziphezulu kwi-Android sele iyinto eqhelekileyo. Kancinci kancinci yenza ukungena kwayo kwezinye iindidi zeefowuni kwintengiso. Ukusetyenziswa okuphambili kwale teknoloji kukukwazi ukwenza iintlawulo ngefowuni yakho ephathekayo ngendlela elula kakhulu.
Inkqubo yokuhlawula ikhawulezisa kakhulu ngokusebenzisa i-NFC, kuba kufuneka sizise ifowuni kufutshane nesiphelo sentlawulo evenkileni kwaye ngale ndlela intlawulo yenziwe. Kukhululekile kakhulu kwaye kuthandwa kakhulu ngabathengi.
Nangona inyani yileya i-NFC kwifowuni ye-Android isinika usetyenziso oluninzi, ukuba kunokwenzeka ukuba kubekhona abasebenzisi abangaziyo. Ke ngoko, apha ngezantsi sikunika ezinye izinto ezinokwenziwa ngobu bugcisa, ukuze ufumane okuninzi usebenzisa isixhobo sakho.
1 Yabelana ngeefayile okanye usetyenziso
2 Yabelana ngenethiwekhi yeWiFi
2.1 Indlela yokurekhoda ithegi yeNFC
Yabelana ngeefayile okanye usetyenziso
Kwale teknoloji siyisebenzisayo ukwenza intlawulo ngomnxeba, singayisebenzisa ukuthumela ezinye izinto. Enkosi kwi-NFC yefowuni yakho ye-Android ungathumela iifayile okanye usetyenziso komnye umntu ngendlela elula kakhulu. Nangona kubalulekile, kwaye kunyanzelekile, ukuba omnye umntu abe nayo le teknoloji kwifowuni yakhe. Ngaphandle koko ayinakwenzeka ukuba isebenze.
Inyani yile yokuba inkqubo ilula ngokwenene. Ukuba sifuna ukuthumela isicelo sokusithumela komnye umntu, kuya kufuneka sikhethe isicelo, sibambelele kuso. Ukulandela, Sincamathisela ii-mobiles kwindawo ekukho kuyo i-eriyali yeNFC Kwisixhobo. Ngokucinezela nokubamba isicelo, ifayile yayo kuGoogle Play iya kuthunyelwa kolunye unxibelelwano. Into ekufuneka uyenzile kukuzikhuphela ngqo kwifowuni yakho.
Singayiphinda le nkqubo inye nezinye izinto ezininzi. Kuba singathumela omnye umntu iifoto, amaxwebhu, iividiyo okanye iaudiyo ngendlela elula kakhulu usebenzisa le teknoloji. Inkqubo eza kwenziwa iyafana, kuqala ukhetha ifayile okanye iifayile esifuna ukuzithumela kulo msebenzisi. Kwaye emva koko sizisa iifowuni kufutshane. Kwimizuzwana nje, ezi fayile ziya kuthunyelwa.
Yabelana ngenethiwekhi yeWiFi
Ukuba abantu beza rhoqo endlwini yakho abaza kusebenzisa i-WiFi, kusenokwenzeka ukuba omnye wemibuzo uqhelekile yile iphasiwedi yelothungelwano. Ukuba ufuna bonke abantu babenothungelwano olunje, kunye igama lomsebenzisi kunye negama lokugqitha Ngendlela elula, ungasebenzisa i-NFC yefowuni yakho. Ke, le nkqubo ilula kakhulu.
Into ekufuneka uyenzile kuku Yenza i-NFC tag yenethiwekhi ye-WiFi, apho kuboniswa khona idatha efanayo. Ngale ndlela, unokwabelana ngayo nabantu abasekhaya ngelo xesha, inokusetyenziswa nakwindawo yokusebenza, kuyo nayiphi na inethiwekhi ye-WiFi kunokwenzeka ukwenza oku.
Ke xa bekhona aba bantu, kufuneka nje beka iselfowuni ngaphezulu kweyakho apho kukho ilebhile kwaye baya kuba nakho ukudibanisa ngqo kuthungelwano. Indlela elula kakhulu enokugcina ixesha ngaphezulu kokuba wabelane ngegama lomsebenzisi kunye negama eligqithisiweyo lwenethiwekhi kunye nawo wonke umntu.
Indlela yokurekhoda ithegi yeNFC
Kukuthandabuza ukuba uninzi luya kuvela. Inyani yile ayisiyonto inzima, nangona Kufuneka sisebenzise isicelo soku. Kwivenkile yokudlala kukho izicelo ezimbalwa zolu hlobo, kodwa kukho enye esebenza kakuhle kwaye sicebisa, ebizwa ngokuba zizixhobo zeNFC.
Ngale sicelo sinamathuba amaninzi, eziya kuthi zisivumele ukuba sizuze lukhulu kobu buchwephesha kwifowuni, ukuze siyisebenzise kakuhle. Isicelo simahla kwaye ungasikhuphelela apha ngezantsi:
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Tutorials » Amaqhinga okufumana okuninzi kwifowuni yakho ye-NFC